1. Iintsuku eziyi-16 zoKulwa uBundlobongela ngakuBafazi liphulo laMazwe aManyeneyo (United Nations) elikhunjulwa ukuqalela nge-25 Novemba ukuya kwi-10 Disemba kunyaka ngamnye ukukhuthaza ulwazi ngendima enkulu edlalwa bubundlobongela ngakubafazi nasebantwaneni.
2. IMIHLA EBALULEKILEYO NGETHUBA LEENTSUKU EZIYI-16 ZOKULWA UBUNDLOBONGELA
25 Novemba 2012 – USuku lwaMazwe ngaMazwe loKulwa uBundlobongela ngakuBafazi:
I-International Day for the elimination of Violence against Women iza kuqalisa iphulo leeNtsuku eziyi-16 zoKulwa uBundlobongela ngakubafazi. Olu suku luqatshelwe ngamatsha-ntliziyo alwela amalungelo abafazi (women activists) njengosuku lokulwa ubundlobongela ngakubafazi (nakubantwana) ukususela ngo-1981. Olu suku luthathwa njengolokukhumbula ukugwintwa ngolunya nangenkohlakalo ngo-1960 koodade abathathu iiMirabal sisters (three Mirabal sisters), amatsha-ntliziyo ezopolitiko kwiDominican Republic, ngokwemiyalelo yomlawuli weDominican, uRafael Trujillo (1930-1961). Olu suku lujolise ekuxhobiseni abafazi ngokuthi mabaphakame balwele amalungelo abo, kodwa kukwabhenelwa nasemadodeni ukuba adlale indima ephambili ekupheliseni ubundlobongela obusekelwe kwezesini (genderbased violence).
1 Disemba 2012 - USUKU LWE-AIDS KWIHLABATHI JIKELELE:
USuku lwe-AIDS kwiHlabathi Jikelele lumalunga nokwandisa ulwazi, ukufundisa nokulwa ukuqala ugwebe (prejudice). Lukhumbuza abantu ngokuba iHIV lidabi eliqhubeka okokoko neliliwa yonke imihla. Ngethuba lePhulo iWorld AIDS Campaign abantu bayakhuthazwa ukuba banxibe iribhoni ebomvu ukuvuyela impilo yabantu abaphila neHIV nokukhumbula abo bathe basweleka ngenxa ye-AIDS. Iribhoni ebomvu luphawu lwamazwe ngamazwe lokuqatshelwa kwe-AIDS nenxitywa ngabantu unyaka wonke, ukuze inxitywe ngakumbi ngosuku lwe-World AIDS DAY ukubonisa ukuba nenkathalo nokuba nenkxalabo nge-HIV ne-AIDS nokukhumbuza abanye ngemfuneko yenkxaso yabo nokuzibophelela kwabo. Uphando njengangoku lubonisa ukuba awona maqela oluntu asemngciphekweni omkhulu wokosulelwa yi-HIV/AIDS ngamabhinqa ase-Afrika aminyaka yobudala iqalela kwi-20 – 34, namadoda ase-Afrika aminyaka yobudala iqalela kwi-25 - 49 namadoda angaphezu kweminyaka eyi-50 ubudala. Iseninzi kakhulu into ekusafuneka yenziwe ukwenzela ukuthintela ukusasazeka kwe-HIV ne-AIDS.
3 Disemba 2012 – USuku lwaBantu abaKhubazekileyo lwaMazwe ngaMazwe:
Olu suku lujolise ekukhuthazeni ukuqonda imiba engokhubazeko, amalungelo abantu abakhubazekileyo nokungabakhupheli bucala abantu abakhubazekileyo koko bafakwe kuyo yonke imibandela yezopolitiko, yezentlalo, yezoqoqosho neyenkcubeko yoluntu jikelele. Lunika ithuba lokuba elowo nalowo noluntu ngokubanzi luthathe inxaxheba kwimisebenzi enjongo ikukudala umoya jikelele wokubandakanya abantu abakhubazekileyo kwizinto zonke ezenziwayo. Njengangoku, bamalunga ne-3.4% abantu eNtshona Koloni abaphila nokhubazeko.
10 Disemba 2012 – USuku lwaMalungelo oLuntu lwaMazwe ngaMazwe:
Bonke abantu banamalungelo asisiseko, kungakhathaliseki buzwe babo, sini, mvelaphi yabo ngokobuzwe okanye ngokohlanga, bala labo, nkolo, lulwimi okanye nawuphi na umba omalunga nemeko yabo. Sonke sinelungelo ngokulinganayo kumalungelo oluntu apho kungekho calu-calulo. USuku lwaMalungelo oLuntu lwaMazwe ngaMazwe lubhiyozela usuku ekwamkelwa ngalo i-Universal Declaration of Human Rights yi-General Assembly of the United Nations.
3. Sicela ukuba bonke abaqeshwa beSebe i-WCED basijoyine ekujoliseni kwezi ntsuku zili-16 baze bathathe inxaxheba ekukhuthazeni ukuqatshelwa kobundlobongela obusekelwe kwezesini nemiba engamalungelo oluntu.
4. Bonisa inkxaso yakho ngokunxiba iribhoni emhlophe ngethuba elisusela kwi-25 Novemba ukuya kwi-10 Disemba 2012.